WAA SIDEE XAALADDA MUQDISHO OO DIBAD BAXYO IYO DAGAALO KA DHACEEN – Shabakadda Amiirnuur
February 19, 2021 2:24 pm by admin Views: 140
kadib isu soo baxyo kooban iyo dagaalo ka dhacay Magaalada Muqdisho Caasimadda ayaad iminka moodaa in ya yara xasiloon tahay inkastoo dhinacyada iska soo horjeeda mid waliba hub iyo ciidamo u diyaarsan yihiin.
Maanta ciidamada Dowladda Federaalka ah ayaa weeraray Siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan oo ay jiraan Ra’iisalwasaarihii horay shaqada looga eryay Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdi-kariim Xuseen Guuleed oo dhamaantood ah Murashaxiin hunguri kaga jiro kursiga uu ku mintidayo Madaxweynaah waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siyaasiyiintaan waxa Madaxweyne Farmaajo ku Micneeyeen Dhiigya Cabdi, kelgii Taliye ah waxayna sheegeen in weerarka uu soo qaaday dhimasho iyo dhaawac geystay waxaana weerarkaasu ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho oo ay dibadbaxayeen.
Dhanka Degmada Kaaraan Ciidamada Dowladda Federaalka ah ayaa rasaas oodda kaga qaaday Dad ku dhawaaqyay Famraajo ka dhaco iyo keligii taliye doono meyno.
Siyaasiyiga Cabdulqaadir Cosoble oo ah Murashax Madaxweyne asiga iyo koox uu abaabushay ayaa dibad ka dhigay guriga uu degan yahay Muqdisho maadaama jidadku xiran yihiin waxayna muujiyeen sida ay Famraajo u neeb yihiin.
Xalay Dagaal ayaa ka dhacay Duleeka Madaxtooyada oo ay Shalay soo degeen Madaaxweynayaashii hore ee Dowladda Federalaka ah oo Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana labada dhinacy midka kan kale ku eedeeyay in iyagu ay weerarka soo qaadeen waa Dowladda Federalaka ah iyo Mucaaradka’e.
Afhayeenka Murashaxiinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu sheegayaa in weerar lagu qaaday Hotel Naaso hablood 2 oo ay deganayaan Madaxweynayaashii hore isla mkaraan Madaxweyne Farmraajo uu doonayay in uu dilo laakiin qorshihiisi aanuu u dhaqan gelin.
Mucaaradku waxay sheegayaan in ay jiraan dad dhintay oo askaru ku jiro iyo kuwo dhaawacmay oo isbitaalada loo qaaday kuwaasoo la daweynayo.
waxa loogu yeero Beesha Caalamka oo ah Shisheeyaha dhisay Dowladda Federalaka ah ayaan tilaab rasmi ah qaadin dhacdooyinkaan waxayna ka daawanayaan sheeda war ay soo saareen ayayna ku sheegen in loo baahan yahay in xal laga gaaro arimaha taagan ee Muranta doorashadu sababay.
Madaxweynaah Federaalka ayaa waqtigi ka dhamaadayw axaanuud oonayaa in uu Xilka sii haysto Mucaaradkuna arintaas ayay ka soo horjeedaan taas ayaana keeneysa isu soo baxyada iyo dagaalada dhiigu ku daatay.